Child – Page3– Healthy Life Journal
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက နိုင်ငံအသီးသီးရှိ မိခင်တွေဟာ ကလေးတွေကိုယ်ကျန်းမာပြီး စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ ပြုလုပ်နေကျ အလေ့အထတွေ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အတုယူဖွယ် အလေ့အထကောင်းတွေကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ – အိန္ဒိယနိုင်ငံသူ မေမေတို့ပြုလုပ်နေကျ ကျန်းမာရေးအလေ့အထ အလေ့အထ –...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဆေးခန်းမှာကြော်ငြာကပ်ထားရသလို၊ ဆရာမတွေကိုလည်း သင်ထားတယ်။ မွေးလူနာများ “ဗိုက်ဆက်တိုက်နာရင်၊ အရည်ဆင်းရင်၊ သွေးဆင်းရင် ဖုန်းဆက်ပါ”လို့။ “မွေးလူနာရှိတယ်ဆရာ၊ ဗိုက်နာနေလို့” “သားဦးလား၊ အရင်မွေးဖူးလား။ ဘယ်တုံးက စနာတာတဲ့လဲ”။ (လူနာအများစုက ဗမာမဟုတ်လို့ တချို့က သားဦးဆိုရင် သိပ်နားမလည်ဘူး။) ဖုန်းဆက်တဲ့လူကို မေးခွန်းနှစ်ခုမေးပြီး၊...
သင့်ကလေး အစာမျိုးစုံ စားတတ်အောင်
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကလေးတွေ အစားအစာမျိုးစုံ စားတတ်အောင် ကျွေးပေးရပါမယ်။ ကလေးတွေက တစ်ခုတည်းကို အမြဲတမ်းကျွေးနေလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ-ကြက်ပေါင်းကျွေးတယ်ဆိုပါတော့။ ကြက်ပေါင်းပဲ အမြဲတမ်းကျွေးလို့ ဘယ်ကလေးမှမစားပါဘူး။ ဒီတော့ အရသာမျိုးစုံဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒီတစ်ခါ ပေါင်းရင်၊ နောက်တစ်ခါဆိုချက်မယ်၊ ပြုတ်မယ်၊...
ကလေးကို မဖြစ်မနေပြောပြသင့်သည့် စကားများ
အရွယ်ရောက်မှ ပြုပြင်ထိန်းကျောင်းတာထက် ကလေးအရွယ်ကတည်းက ပြုပြင်ထိန်းကျောင်းပေး သင့်ပါတယ်။ ကလေးကို ပြောသင့်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေကတော့- (၁) တကယ်ထူးခြားတဲ့ ကလေးလေးလို့ မေမေထင်တယ်။ (၂) အိုး . .သိပ်တော်တာပဲ။ (၃) သား/သမီးက မေမေ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ကွယ်။ (၄) မေမေတို့ဆီ သားရောက်လာလို့...
ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. လူကြီးတွေမှာ ဒူးနာတာ အဖြစ်များပါတယ်။ ကလေးတွေမှာကော ဘယ်လိုအခြေအနေကြောင့် ဒူးနာတတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. အမှန်ဆိုရင် ကလေးတွေက ဒူးမနာတတ်ကြပါဘူး။ ဒူးနာတာက လူကြီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေက ဒူးနာတယ်ဆိုပြီး...
ဒေါက်တာသီရိ မနေ့က ဈေးသွားရင်း သူများလွှင့်ပစ်ထားတဲ့ ၂ လသားလောက်အရွယ် ကြောင်လေးတစ်ကောင် မွေးဖို့ အိမ်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ လမ်းမှာ ကြောင်စာဝင်ဝယ်၊ အိပ်ဖို့နေရာစီစဉ်ပေး၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုထိုင်စကားပြောပေးနေမှ အစာစားတယ်၊ ခွေပြီး အိပ်နေလိုက်၊ ခဏနေ ပေါင်ပေါ်လာအိပ်လိုက်၊ အိမ်ကသား သားကြီးကျယ်(၂ နှစ်သားအရွယ်...